Tag: mgbasa ozi ngosi | Martech Zone
Tag: mgbasa ozi ngosi
N'ime ọchụchọ a na - akwụ ụgwọ, ngosipụta na mgbasa ozi mkpanaaka, enwere ọtụtụ ngwakọ ịzụta ihe. Iji nweta nsonaazụ siri ike, ị kwesịrị ịnwale ịzụrụ otu narị otu narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku nchịkọta isiokwu na ọchụchọ akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ngosipụta mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi mkpanaaka, ngwa ahịa nwere ike gbasaa n'etiti narị otu narị ma ọ bụ puku saịtị ma ọ bụ ngwa. Gịnị bụ Real-ere ahịa? Iji aka nyochaa ma gwaa ebe ndị ịchọrọ